Linq: Bixiyahaaga Isgaarsiinta Goobta dhow (NFC) Alaabada Kaarka Ganacsiga | Martech Zone
Haddii aad akhristahaye ahayd boggeyga muddo dheer, waad ogtahay sida aan ugu faraxsanahay inaan ka gudbo noocyada kala duwan ee kaararka ganacsiga. Waxaan haystay kaararka ogeysiiska ka dib, kaararka laba jibbaaran, kaararka birta ah, kaararka laalamiyey… Aad ayaan ugu raaxeystaa. Dabcan, xirida iyo awood la'aanta safarka, ma jirin baahi badan oo loo qabo kaararka ganacsiga. Hadda safarkaasi wuu furmayaa, in kastoo, waxaan go'aansaday inay ahayd waqtigii cusboonaysiinta kaarkayga oo xoogaa amar ah.
Mid ka mid ah waxyaabaha aan marwalba ka baqo ayaa ah inta kaararka ganacsiga ah ee la iibsado iyo inta la keenayo dhacdo kasta. Ilaa aan ka dhacay Linq. Linq wuxuu leeyahay khad u gaar ah alaabta kaararka ganacsiga ee dhijitaalka ah oo leh NFC gundhig. Haddii aad in muddo ahba aniga i daba socotay, waad ogaan doontaa inaan ku tijaabiyay dhowr kaarar oo NFC ah waagii hore laakiin ma aysan shaqeyn. Shirkaddu waxay qabatay arrimo badan oo ay ku daabacaysay iyaga ka dibna cinwaanka loo socday URL-gu wuxuu ka yaraa mid aan caadi ahayn.
Linq wuu ka duwan yahay, wuxuu ku darayaa barnaamijka mobilada si loo dhiso bog bilaash ah oo aasaasi ah (ama bog lacag leh oo leh casriyeyn wanaagsan) iyo sidoo kale aalado kala duwan oo aad iibsan karto oo NFC gundhig u ah. Boggaaga degitaanku wuxuu lahaan karaa xiriiriyeyaashaaga xiriir bulsheed, xiriiriyeyaasha lacag bixinta (Venmo, PayPal, ama CashApp), waxayna u oggolaan kartaa booqdahaaga inuu soo dejiyo kaarkaaga xiriirka si toos ah loogu daro xiriirada ay leeyihiin.
Iyada oo ay la socoto Linq Pro, oo rukumo ka ah badeecadooda Boodhka, sidoo kale waad:
Deji bogga aad rabto ee aad rabto baxdaa doorashooyinka.
Kudar waxyaabo dheeri ah boggaaga degitaanka Linq. Waxaan ku daray fiidiyow YouTube ah laakiin sidoo kale waad ku dari kartaa xiriiriyeyaasha kulanka, Spotify ama aaladda Soundcloud.
Kudar foomka boggaaga si aad uqorto macluumaad dheeri ah.
Iyada oo ay kaarka Premium iyo habeynta qaar ka mid ah, waxaan awooday inaan dhiso a kaarka ganacsiga gaarka ah oo ay ku qoran tahay astaanteyda (sawirka kore) oo aan si fudud ugu dhajin karo kiiskeyga taleefankayga ka dibna aan la soo bixi karo mar kasta oo qof i weydiisto ama aan bixiyo kaarkayga. Halkii qof walba la siin lahaa kaar ganacsi, waxaan ku dhejin karaa taleefankooda ama waxay ku baari karaan lambarka QR ee gadaasha dambe waxaana loo keenay bog soo degitaan leh dhammaan macluumaadkeyga iyo sidoo kale xiriiriye soo dejin oo lala soo dejiyo si toos ah ula xiriir macluumaadka taleefankooda!
Douglas KarrBogga Degitaanka ee Linq
NFC oo Lagu Dhejiyay Alaabooyinka Kaararka Ganacsiga ee Dijital ah
Linq kaliya ma bixiso kaarka caymiska ee aan soo iibsaday, dhab ahaantii waxay leeyihiin xulasho aad u badan oo alaab ah oo ay ka kala xushaan:
Kaarka Linq - noocyo badan oo xulashooyin ah oo loogu talagalay kaararka hal-adeegsiga ah oo aad ka heli karto iyaga oo si cad u ah, lagu dhejiyo astaantaada, ama aad leedahay naqshad dhan.
Linq Jijin - jijin fudud oo NFC gundhig ah… uun ku garaac jijiminta taleefankaaga oo bogga aad u socoto ayaa furmaya.
Kooxda Linq loogu talagalay Apple Watch - koox Apple Watch ah oo NFC gundhig u ah… kaliya ku dhaji kooxda taleefankaaga oo bogga aad ku socoto ayaa furmaya.
Iskuxirka Hub - Miis desktop ama miiska dushiisa oo NFC karti u leh isla markaana ay ku qoran tahay lambar QR ah oo loogu talagalay dadka soo booqanaya miiskaaga ama qolkaaga.
Xiriirinta Taabo - Badhan qabow oo yar oo NFC ah oo aad ku dhajin karto dhabarka taleefankaaga ama kiiskaaga taleefanka. Kuwani sidoo kale waxaa lagu qaabeyn karaa lambarka QR ama astaantaada.
Linq ee Kooxaha
Linq ee kooxaha ayaa awood kuu siinaya inaad la socoto kooxahaaga waxqabadka isku xirka markay u qaybinayaan macluumaadka xiriirkooda kuwa kale.
Haddii aad socodsiineyso dhacdo bulsheed, Linq wuxuu u hayaa calaamado iyo xarumo loogu talagalay kaqeybgalayaasha iyo waratada. Waad kala socon kartaa iskuxirka iyo kaqeybgalka kaqeybgalayaasha, kafaala qaadayaasha, iyo waratada!
Ka ogow wax badan oo ku saabsan badeecadaha iyo waxyaabaha ay bixiso Linq dukaankooda internetka:
Shaacinta: Waxaan iska diiwaangeliyey sidii Safiir Linq waxaanan u adeegsanayaa xiriirkayga ku xiran maqaalkan.
Tags: androidkaarka ganacsicashappkaarka xiriirkafaylka xiriirkamacluumaadka xiriirkaiPhone macruufkabaxalinqlinq proNfcnfc tufaax bandjijin nfcKaarka ganacsiga nfckaararka ganacsiga nfcbadhanka nfckaalay